स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा फराकिलो मतान्तर रहेका रोल्पाका वडाहरु « Online Sajha
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा फराकिलो मतान्तर रहेका रोल्पाका वडाहरु
अघिल्लो अंकमा हामीले स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा रोल्पा जिल्लाका स्थानीय तहमा रहेका वडाहरुमा १०० भन्दा कम मतान्तर रहेका वडाहरुको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ । यस अंकमा सोही निर्वाचनमा रोल्पाको स्थानीय तहका वडाहरुमा फराकिलो मतान्तर रहेका वडाहरुको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेका छौँ । यहाँ दोब्बर भन्दा बढी मतान्तर भएको वडाहरुको मात्रै विवरण समावेश गरिएको छ ।
थबाङ गाउँपालिकामा पर्ने ३ नम्वर वडा साविक मिरुल गाविसमा पर्छ । स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा यस वडाबाट नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । प्रतिस्पर्धामा आफ्ना निकटतम प्रतिद्धन्दी नेपाली कांग्रेसका खरिलाल डाँगीलाई ५३९ मतले हराउँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका भिमबहादुर रोका विजयी भएका थिए । नेपाली काँग्रेसका डाँगीले १६३ मत प्राप्त गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका रोकाले ७०२ मत प्राप्त गरेका थिए ।
परिवर्तन गाउँपालिका वडा नंं २ साविकको राँसी गाविसमा पर्छ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रतिनिधि सभा सदस्य जयपुरी घर्ती समेत मतदाता रहेको सो वडामा स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा ३ वटा दलले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । नेपाली काँग्रेसबाट बलवीर वली, नेकपा एमालेबाट मनप्रसाद घर्ती र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हरिप्रसाद बुढाले वडाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । मत परिणाम अनुसार नेपाली काँग्रेसका बलवीर वलीलाई ६९८ मतले पछिपार्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका हरिप्रसाद बुढा विजयी भएका थिए । नेपाली काँग्रेसका वलीले ३७९ मत प्राप्त गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका बुढाको पक्षमा १ हजार ७७ मत आएको थियो । सो वडामा नेकपा एमालेका उम्मेदवार मनप्रसाद घर्तीले ३४० मत प्राप्त गरेका थिए ।
परिवर्तन गाउँपालिका वडा नं ४ साविक पाछाबाङ गाविसमा पर्दछ । स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा सो वडाबाट नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । प्राप्त मत परिणाम अनुसार नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार कुलबहादुर घर्ती भन्दा ४९९ मत बढी ल्याएर नेकपा माओवादी केन्द्रका दलबहादुर बुढा विजयी भएका थिए । नेपाली काँग्रेसका घर्तीले ३१७ मत प्राप्त गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका बुढाको पक्षमा ८१६ मत आएको थियो ।
परिवर्तन गाउँपालिका वडा नंं ५ साविकको राँकोट गाविसमा पर्दछ । स्थानीय तह निर्वाचन २०७७ मा सो वडामा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । मत परिणाम अनुसार नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार खड्क घर्तीलाई ७ सय ९१ मतले पछि पार्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार शुकबहादुर बुढा विजयी भएका थिए । नेपाली काँग्रेसका घर्तीले १सया ७६ मत प्राप्त गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका बुढाको पक्षमा ७६७ मत आएको थियो । उक्त वडामा नेकपा एमालेका विक्रम वलीले ९८ मत प्राप्त गरेका थिए ।
माडी गाउँपालिका वडा नं. २ साविकको घर्तीगाउँ गाविसमा पर्छ । स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा उक्त वडामा २ राजनैतिक दल र १ स्वतन्त्र गरि ३ जनाको वडाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । प्राप्त मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसका उमेदवार भवनसिं घर्तीमगर भन्दा २५४ मत बढी ल्याएर नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार ललित घर्ती विजयी भएका थिए । नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार घर्तीले २सय २४ मत प्राप्त गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार घर्तीको पक्षमा ४सय७८ मत आएको थियो । सो निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका तीलकुमारी परियारले १४ मत प्राप्त गरेकी थिईन ।
माडी गाउँपालिका वडा नंं ५ साविक भाबाङ गाविसमा पर्छ । स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र वीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । मत परिणाम अनुसार नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार विष्णुकुमार घर्तीलाई ४सय ३० मतान्तरले हराउँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका भरत बुढा विजयी भएका थिए । नेपाली काँग्रेसका घर्तीले ३९१ मत प्राप्त गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका बुढाको पक्षमा ८२१ मत आएको थियो ।
रोल्पा नगरपालिका वडा नं.७ साविकको जंकोट र कोर्चबाङ गाविस मिलेर बनेको छ । उर्जा जलश्रोत तथा सिचाई मन्त्री वर्षमान पुन र पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती समेत मतदाता रहेको सो वडामा स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । प्रतिस्पर्धामा नेपाली काँग्रेसका रती कामीलाई ४६२ मतान्तरले हराउँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका गणसिं पुन विजयी भएका थिए । नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार कामीले १७६ मत प्राप्त गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार पुनले ६३८ मत प्राप्त गरेका थिए । सो वडामा नेकपा एमालेका उम्मेदवार धनु थापाले ४९ मत प्राप्त गरेका थिए ।
वडा नंं ८
रोल्पा नगरपालिका वडा नं. ८ साविकको जंकोट गाविसमा पर्दछ । स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा यस वडाबाट नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । मत परिणाम अनुसार नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार खटकबहादुर खत्री भन्दा ३३७ मत बढी प्राप्त गरि नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार सनसिं बुढा विजयी भएका थिए । नेपाली काँग्रेसका खत्रीले ३०१ मतप्राप्त गर्दा नेकपा माओवादीको बुढाले ६३८ मत प्राप्त गरेका थिए । सो वडामा नेकपा एमालेका उम्मेदवार खिमबहादुर खत्रीले १६ मत प्राप्त गरेका थिए ।
लुँग्री गाउँपालिका वडा नं १ साविक पाङ गाविसमा पर्छ । स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा सो वडाबाट नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवारले प्रतिप्पर्धा गरेका थिए । प्राप्त मत परिणाम अनुसार नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार मोती पुनले निकटतम प्रतिद्धन्दी नेकपा माओवादी केन्द्रका दिलबहादुर पुनलाई ३९४ मतले पछि पार्दै विजयी भएका थिए । नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार पुनको ६६४ मत आउँदा नेकपा माओवादी केन्दका पुनको पक्षमा २७० मत आएको थियो । सो वडामा नेकपा एमालेका उम्मेदवार धनलाल पुनको १५३, राप्रपाका उम्मेदवार नरबहादुर खत्रीको १६४ मत र राजमोका उम्मेदवार अनराम पुनको १७७ मत आएको थियो ।
लुँग्री गाउँपालिका वडा नं २ साविकको सिर्प गाविसमा पर्छ । स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा सो वडामा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । मतपरिणाम अनुसार नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार अमृत घर्तीमगरले नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार भिमबहादुर घर्तीक्षत्रीलाई ५४७ मतले पछि पार्दै विजयी भएका थिए । नेपाली काँग्रेस उम्मेदवार घर्तीले ८५२ मत प्राप्त गर्दा माओवादी उम्मेदवार घर्तीक्षत्रीको ३०५ मत आएको थियो । सो वडामा नेकपा एमालेका उम्मेदवार घने घर्तीक्षत्रीले ५४ र राप्रपाका उम्मेदवार श्यामबहादुर खड्काले १८ मत पाएका थिए ।
सुनछहरी गाउँपालिका वडा न १ साविकको सेरम गाविसमा पर्छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा सो वडाबाट नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । मतपरिणाम अनुसार सो वडामा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार वीरबहादुर बुढाथोकीलाई २६९ मत अन्तरले हराउँदै नेकपा माओवादी केन्दका महावीर राना विजयी भएका थिए । काँग्रेस उम्मेदवार बुढाथोकीले १५४ मत प्राप्त गर्दा माओवादी उम्मेदवार रानाले ४२३ मत प्राप्तगरेका थिए । सो वडामा नेकपा एमालेका उम्मेदवार चन्द्रबहादुर रोकाले ६० मत प्राप्त गरेका थिए ।
सुनछहरी गाउँपालिका वडा नं. ७ साविकको जेल्बाङ गाविसमा पर्छ । स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा सो वडाबाट नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । मतपरिणाम अनुसार नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार विषलाल बुढालाई ७०८ मत अन्तरले हराउँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका टिकाबहादुर बुढा विजयी भएका थिए । काँग्रेस उम्मेदवार बुढाले ७४ मत प्राप्त गर्दा माओवादी उम्मेदवार बुढाको पक्षमा ७८२ मत आएको थियो । उक्त वडामा नेकपा एमालेका उम्मेदवार प्रसाद कामीले १९ मत प्राप्त गरेका थिए ।
सुनिलस्मृती गाउँपालिका वडा नं. ५ मा साविकको गजुल र फगाम गाविस पर्दछ । पूर्व संसद जोखबहादुर महरा मतदाता रहेको सो वडामा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाका उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । प्रतिस्पर्धामा नेकपा एमालेका उम्मेदवार दीपक बिष्टलाई ६०८ मतले पछि पार्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार नमराज थापा विजयी भएका थिए । नेकपा एमालेका उम्मेदवार बिष्टले ७६ मत प्राप्त गर्दा माओवादी उम्मेदवार थापाको पक्षमा ६८४ मत खसेको थियो । सो वडामा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार शुकलाल थापाले ६३ मत प्राप्त गरेका थिए भने राप्रपा उम्मेदवार पुस्तबहादुर पुनले १८ मत प्राप्त गरेका थिए ।(लेखक न्यौपाने —नेपाल पत्रकार महासंघ, जिल्ला शाखा रोल्पाका अध्यक्ष हुन् )